I-LUXURY APARTMENT KWINDAWO ENKULU YASETORONTO! - I-Airbnb
I-LUXURY APARTMENT KWINDAWO ENKULU YASETORONTO!
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguSvetlana
Isiteyitimenti ekwiNqanaba eliPhantsi kwiNdlu eSemi-Detached! Indawo yokungena eyahlukileyo, iNdawo yabucala, yangasemva enendawo yeBBQ eneRavine Lot!
Esi siSitudiyo esihle esiHlaziywe ngokupheleleyo! Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo: I-Cooktop, i-oveni encinci yaseBreville, i-microwave kunye nomatshini wekofu. INetflix kunye neAmazon TV, iWiFi iyafumaneka!
Ukuhamba umgama ukuya kwizinto ezininzi eziluncedo: iiLongos, iStarbucks, iTim Hortons, iindawo zokutyela, indawo yoMthambo, kunye nokunye okuninzi!
Imizuzu kude neHWY 404 kunye neAurora GO Station!
Indawo yokuhlamba iyafumaneka ngeentlawulo ezongezelelweyo!
Indawo yokuhlala ilungiselelwe abahambi, abantu bezoshishino, ukulungiswa, phakathi kweentengiso zezindlu okanye iimeko ezingalindelekanga.
Indawo entle, indawo ezolileyo, eluhlaza kakhulu kwaye ikufutshane nayo yonke into! I-Longo's superstore ene-Starbucks kuyo, i-Tim Hortons, iindawo zokubhaka, iivenkile zokutyela, iibhanki, iGoodLife Fitness kunye nokunye okuninzi- wonke umgama wokuhamba ukusuka kwindlu yethu! Imizuzu kude kwi-404, kunye nesikhululo se-GO.
Iindwendwe ziya kuba neemfihlo ezipheleleyo kwiflethi ekwabelwana ngayo ngokufikelela kwiindawo zokuhlambela iimpahla ( Kufuneka uthumele isicelo kwangaphambili ukuba impahla iyafuneka) kunye nendlu yangasemva. Iindawo zokupaka zasimahla ziyafumaneka kwiimoto kwi-driveway okanye esitratweni. Nceda UNGAYAYIVIKELA imoto yomninimzi, ukuba upaka endleleni.
Iindwendwe ziya kuba neemfihlo ezipheleleyo kwiflethi ekwabelwana ngayo ngokufikelela kwiindawo zokuhlambela iimpahla ( Kufuneka uthumele isicelo kwangaphambili ukuba impahla iyafu…